ukunakekelwa asebekhulile emakhaya asebekhulile ezindaweni zokunakekelwa kwabadala
Uzofunda ukuthi ungabhekana kangcono nomamukeli wokunakekelwa (kokubili izingane kanye nabantu asebekhulile) nezidingo zabo ezithile. Ujwayela ukusebenzisa izindlela zokuphakamisa kanye namasu okuphakamisa ukwenza umsebenzi wakho ngendlela ye-ergonomic. Uzofunda ukuthi ungasebenza kanjani nefayela lokunakekela futhi uzothola lonke ulwazi oludingekayo mayelana nezithombe zemitholampilo. Ukunakekela ukuqeqeshwa emfundweni yesikhathi esithile kuyilungiselelo elihle lenhlelo yokunakekelwa kwezempilo. Kunesidingo esikhulu sabanakekeli emakhaya asebekhulile, izikhungo zokunakekelwa kanye nokunakekela ekhaya. Ngemuva kokuqeqeshwa kwakho ungaqala ngokushesha ngoba unolwazi olwengeziwe. Ungafunda futhi ngokuqhubekayo.
Sinikeza umhlinzeki wokuqeqesha ngenqubo emibili. Ukufunda okubili kusho ukuthi ufunda ukuhweba kwakho esikoleni nasezindaweni zokusebenza. Uzokhokhwa futhi ngezinsuku zakho zokusebenza. Uma usebenza ngenkontileka yomsebenzi wesikhathi esithile, umqashi akhokhela ku-850 euros ngenyanga.
Uthanda amahora okusebenza okuguquguqukayo
Ukuqeqeshwa kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemibili.
De ukuqeqeshwa okunakekelayo e itoho imfundo uhlelo lwento okusho ukuthi ngeke ukwazi ukujoyina nganoma yisiphi isikhathi sonyaka kodwa uvele ungazi iziqu ngo-June 30.
Ukuqeqeshwa ukulungiselela kahle i ukuqeqesha ochwepheshe bezempilo.
Ukuze uthole iSitifiketi Sokunakekelwa, kufanele futhi ube namakhono Umsizi Wokusiza kufinyeleleke. Ungakwazi ukufeza lezi zakhono kanye nathi. Yiba nolwazi e Nutrition & Ukunakekela ungakwazi ukuthatha nemakhono labawatfolile ngesikhathi Ukunakekela ukuqeqeshwa.
olwanele Dutch kuyimfuneko, kusukela zokuxhumana nomamukeli ukunakekelwa kanye nabalingani yakho kubaluleke kakhulu.
Unezikhathi zokusebenza eziguquguqukayo futhi ngokuvamile usebenza ezishintshini. Lokho kusho imisebenzi yokuqala nokuphumula kanye nempelasonto ukusebenza futhi!
Ukunakekela kuyisisebenzi somphakathi ekunakekeleni. Uphela eqenjini lokunakekela okufanele usebenze eduze. Uhlangana nozakwamukela ukunakekelwa, odokotela, umndeni kanye namavolontiya. Usebenza ekhaya lomhlalaphansi noma ekhaya labantu abadala. Ngezinye izikhathi nawe usebenza esikhungweni sezempilo.
Izithuba zakho zomsebenzi zizoba mkhulu uma uzonakekela ukuqeqesha ochwepheshe bezempilo kulandela. Uzobe uthola i-visa kumhlinzeki wezempilo, okwenza ukhathazeke kakhulu ngomkhakha wokunakekela.
Ungathola umsebenzi ezindlini zokuhlala, izindlu nezindlu zokunakekelwa, ukunakekelwa ekhaya, isibhedlela noma abakhubazekile.
Lo mkhakha ulawulwa kakhulu. Uthola umholo ngokusho kukaBarema. Uma ufuna ukwazi inani eliqondile, thintana nomeluleki wethu wokuqashwa. Inkokhelo nezimo zishintsha ngokushesha futhi kuxhomeke esimweni sakho siqu.
Uma ufuna ukuqhubeka ucwaninga ngemuva kokuthola isitifikedi sakho kanye nediploma, ke uhlelo lokwelapha futhi ngemuva kwalokho noma yini umhlengikazi angase abe yindlela enhle.
Ungakwazi ukuya kulolu hlelo ukunakekela ngokusebenza isipiliyoni thola ku:
izindawo zokunakekelwa zokuhlala (izindawo zokuhlala)
Khutshaziwe / Kuvinjelwe Abantu
izikhungo zengqondo / izifo zengqondo
Ukuqeqesha Ukunakekela imfundo yesikhathi esithile ngokuningiliziwe
Ufunda ukusebenza ndawonye ngaphakathi kweqembu elikhathalelayo futhi ngaphansi kokuqondiswa komhlengikazi. Wena landela uhlelo ukunakekelwa futhi ungase wenze njalo ngaphansi kokuqondisa umhlengikazi eminye imisebenzi lasebekhulile nabagulayo: ukunakekelwa temlomo, ngisize nge ekuphuzeni imithi, ukulinganisa ishayela, irekhodi lokushisa komzimba, thatha amasampula umchamo, ... ukwamukela imiyalo, ukufunda ukubonisana kanye nokubika nakho kuyingxenye ukuqeqeshwa yakho .
Ufunda acabangele somzimba, isimo kwezenhlalo-zingubudlelwane nezingokomzwelo zabantu umuntu odinga ukunakekelwa. Ngezinye izikhathi, ubheka izinguquko ezibalulekile udinga ukubika. Ufunda phakathi izifundo zakho kanjani qina ungakwazi isinyathelo ngokuhlonipha isiko umamukeli ukunakekelwa, imikhuba yakhe, imikhuba yakhe emihle, ...
Uyoba nomthwalo wemfanelo wokuhambisa umhlinzeki wokunakekelwa nokuphendula ngokuphumelelayo ezimweni eziphuthumayo nokusebenzisa amasu okusiza okuqala.